15 Midab Is qurxinta Palette Qurxinta, Midabbada Sare, Biyo-la’aanta & Muddada-dheer ee Xirfad-xirfadeedka Matte Nudes Shimmer Indhaha Dabiiciga ah Hooska Fudud ee Isku-darka.
Midka koowaadIsticmaalka Waqti Dheer: Isticmaalka sheygan, wuu sii jirayaa maalinta oo dhan. Iyada oo midabbo aad u sarreeya leh iyo muddo dheer soconaya, ku ilaali qurxinta indhaha ee qumman muddo dheer.
Qalabka wax lagu qurxiyo ee waxqabadka badan - JOYO eye eye disc wuxuu leeyahay 15 nooc oo waxqabadyo sare oo hooska isha ah, oo ay ku jiraan 5 midab oo luul ah iyo 10 dabiici ah oo dabiici ah. Geesinimo, dhexdhexaad, istaag ama isku dar.
Labada hore:15budada midabka,Adoo adeegsanaya midabada ugu badan ee la adeegsado, waxay hubisaa iswaafajinta midabka maqaarka ugu fiican iyo dhammeystirka dabiiciga ah. Waxay ku jirtaa tayo aad u fiican oo aad u kala duwan oo ku habboon in la isticmaalo si ka fudud oo la gashan karo, si fudud loogu codsan karo burush qarsoodi ah, oo aad isugu dhafan si loo abuuro hooska aad u baahan tahay.
Midabyo waara, midabbo heer sare ah oo waara, dhawraya qurxinta hooska indhaha oo qumman. Farshaxanistaha ku xeel dheer farshaxanka ayaa soo jeedinaya in la mariyo midab maqaarka u dhow maqaarka, laga bilaabo xariiqa indha-indheynta illaa laf-xoqidda, si loo hubiyo is-dhexgalka bilaa cilladd ah ee dhammaan hooska indhaha. Casaan iyo casaan iyo in ka badan.
Saddexda hore:Cashadu midabkeedu yahey midab-kalaabeed fudud oo indhashareer ah oo si fudud loo dhisi karo loona habeeyey midab kasta oo maqaar ah, midab lehna, midab adag. Muddo dheer, 8-saacadood oo xirnaan ah oo aan baabi'in, biyo-caddeyn, ku hay indhahaaga qurxinta indhaha ee qumman muddo dheer.
Afarta hore:Palette qaanso-xirfadeed, midabkani saxanka hooska ee isha wuxuu ka kooban yahay 18 midab oo dhalaalaya min guduud ilaa casaan qafiif ah, oo leh dhammaan waxa loo baahan yahay si loogu wareejiyo baalasha indhaha. Muuqaalkan hooska sare leh ee hooska isha leh ayaa kaa caawin doona inaad abuurto muuqaalka ugu soo jiidashada badan.
Ka-hortagga biyuhu: midab waarta, hooska indhaha oo dhalaalaya, xirasho habboon iyo nadiifin fudud. Saxankeenna indhaha ee loo yaqaan 'Eyeshadow' waa mid aad u fudud in la isticmaalo (runti, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo faraha halkii burushyada laga dhigi lahaa).
Ikhtiyaarro kala duwan oo aad ka kala dooran karto: waa wax aad u fudud in la sumeeyo, si fudud loo qaso, iyada oo ku siinaysa kala duwanaansho aan fiicnayn oo ku habboon. Caanaha budada ah ee xirfadlayaasha ah ayaa siman, samee indho-qabad ama muuqaal maalin kasta. Hooska indha indheynta indhaha ayaa lagu marin karaa wajiga.
Abuur qurxiyo aan xad lahayn, oo ku habboon munaasabado kala duwan, sida jaangooyooyin is qurxin maalinle ah, is qurxin, xallinta doorka ciyaarta, iyo xitaa Fasaxa fasaxa. Hadiyad ku habboon gabdhaha, marwooyinka, marwooyinka, dhalashada, Kirismaska, maalinta hooyada, Maalinta Jacaylka, iwm
Hore: Qurxinta indhaha-BD15-COOL
Xiga: Waji qurxiyo-BD-Blush
Qurxinta Indhaha Dahabka ah
Qurxinta Indhaha ee Halloween
Qurxinta Indhaha Dabiiciga ah
Qurxinta Indhaha oo Fudud
Qurxinta Indhaha Smokey
Telefoonka: + 86-755-21047959
Cinwaanka: Qolka 501, Lambarka 279-6, Tuulada Dabutou, Beesha Songyuansha, Guanhu Street, Degmada Longhua
JOYO © Dhammaan xuquuq dhowran Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Lipstick yar, Burushka ugu Fiican, Liimiga Shimmer, Eyeshadow kareemka ugu fiican, Qurxinta Indhaha Dahabka ah, Matte Eyeshadow Palette, Dhammaan Alaabooyinka